Saadaalin yaa loo magacaabin Wasiirka koowaad
Saadaalin yaa loo magacaabin Wasiirka koowaad 1/11/07
Waxaan ku bilaabayaa, erayga saadaalin waxaa weeye macnahiisu in la mallawaalo wax aan wali dhicin, hase yeeshee lagu cabiro waayo-aragnimo, hebo Alle bixiyo iyo waxyaalo la isu geeyo, sida saadaasha hawda (parameters) afka Ingiriis.
waxaan shaki ku jirin in iscasilaadii prof. Geedi ay tahay fursad weyn oo ay sugayeen kooxa badani, oo qaarba doonayaan inay si gaar ah uga faa`aadeystaan. dhamaan kooxahaani inkasta oo ay mar mar u muuqdaan kuwo wada socda, haddana waxay isku hayaan in arimaha soomaaliya loo meel mariyo siday wax u rabaan. Intii ka danbeysay iscasilaaddii Wasiirkii koowaad, waxaa durba bilaamay kal guur iyo isu-guur aan maalmo ka hor ka jirin Baydhabo.
wasiirka koowaad in loo magacaabo Ismaaciil Hure Buubaa,
saadaalintaan baan waxaan ku saleynayaa arimo badan oo aan soo taxidoono.
sida aan uga hadalay reer mogdisho, baa waxaa la isweydiin karaa maxuu xildhibaan Buubaa ka qaban xaaladda soomaaliya , haddii uusan aheyn reer xamar, taageero iyo culeys siyaasadeed ku la heyn gobollada waqooyi, oo rag kale kaga miisaan weyn yihiin. Hase yeeshee waxaa meesha soo galeysa su`aal ah �ma waxaan kaliya oo wax ku cabireynaa kama tirsan deegaankaas, kamana tirsana xisbiyada Kulmi iyo Udub, mise xiriir siyaasadeed oo lag faa`iideysan karo iyo kugu san-kugu san?
Mudanahaani, wuxu ka tirsan yahay dawlada FKMG, deegaan ahaan wuxuu ka soo jeedaa gobollada waqooyiga, oo ku dhawaaqay goni isu taagid ilaa markii ay burburtay dawladii Soomaaliyeed `91, hase yeeshee aan wali helin aqoonsi dawli ah. Mudanahaani wuxuu noqon karaa buundo la dhex dhigo dhinacyada, si looga tilaabsado khilaafka, mar haddii qaab fidaraal la qaatay, si loo soo celiyo qarannimadii iyo sharafkii Soomaaliyeed. Waxaa kale oo magacaabidaan taageerikara dawlado iyo kooxo ay ka dhexeyso wada shaqeyn iyo kala sad bursi, laakiin u wada arka buubaa inay la shaqeyn karaan. markii laga tago dawladaha sida tooska ah faraha ku la jira arimaha Soomaaliya, jaamacada carabtu waxay taageereysaa in jagadaan bannaan loo magacaabo wajigaan aan ku cusbeyn oo af iyo xiriirba ka dhexeeyo. Ma aha wax qarsoon in Buubaa uu xirrir fiican ka dhexeeyo isaga iyo dawladaha carabta, uuna kaalin u buuxin lahaa madaxweyne Yuusuf oo dawladaha carabtu ay ku tiriyaan dhinaca itoobiya. Hase yeeshee ka dib intii dawlada mareykanku hantiday hoggaaminta arimaha Soomaaliya, waxaa la wada saaraanaa doon, oo xataa waxaa muuqda in Qaahira iyo Adisba ay isku dhinac ka saran yihiin marka laga hadlayo arimaha Soomaaliya.
Ujeedada ka danbeysa ka qeyb qaadashada dawlada sacuudiga shirkii xamar ma aheyn mid dhaqaale kaliya. Waxaa hadda muuqda in dawlada sacuudigu u dhaqaaqday meel marinta go`aamadii ka soo baxay shirkii lagu qabtay xamar ee lagu magacaabay dib-u-shiisinta, laguna soo saxiixay magaaladda Jeddah. Mar haddii go`aankii lagu saxiixay dalkeeda, waxaa lama huraan ah inay u raadiso taageero siyaasadeed. waxaa laga yaabaa in arimaha uu u yimid boqor Cabdalle dalka Ingiriiska ay ka mid yihiin xaaladda bariga dhexe sida Iran, iraq, dagaalka Turkiya ku soo qaaday qeyb ka mid ah dalka Iraq iyo iyada oo la filayo in la soo qaado arimaha Soomaaliya.
Waxaa la saadaalinyaa in Boqorka sacuudigu ka codsado dhinaca Ingiriiska inay dabciyaan mawqifkoodii ku aadanaa soomaaliya. waxaa hubaal ah in hawl fudeyntaan ay ku xiran tahay shurruddi. Bal fiiri qoraalkaan � Shirkii Wasiirada arrimaha dibadda dalalka Carabta oo shalay ka furmay magaalada Riyaad ee dalka Sucuudi Carabiya oo lagu soo casuumey Wasiirka arimaha dibada soomaaliya Ismaaciila Hure (Buubaa) ayaanu Ismaaciil ka soo xaadirin shirkaas. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Sucuudiga Amiir Saud Faisal Abdulaziz al Saud oo yaaban ayaa si gaar ah Ra'isal Cali Maxamed Geeddi u weydiiyey su'aashaas.Geeddi waxa uu su'aashaas kaga jawaabay si indha taag taagid ah isagoo sheegay in Buubaa uu howlo u hayo dowladda loogana maarmi waayay inuu howlahaas dalka ka sii wado� Hormood net, Written by Abdirahman, Wed,28/03/07.
Magacaabida Ismaaciil Buubaa waxaa kale oo taageerikara dawladaha reer galbeedka oo aan ku mideysneyn sidii xal loogu helilahaa dhibaatada soomaaliya, oo ay mas`uulka ka yihiin ilaa markii ay kala qeybiyeen ummadda Soomaaliyeed iyo dhulkeedaba. Hase yeeshee xilligaan oo ay socon-waayeen riwaayadihii ay ka mid yihiin dagaaladii lagu qaaday iraq, afganestaan iyo rajo xumada laga qabo jooginta barnaamijka Iran. Reer galbeedka waxaa kale oo fooda soo saaray, xulufadii dhawaan shirka ku yeeshay magaaladda Tehran ee dalka Iran, oo Ruushka iyo Chiinihu horboodayaan iyo xaaladda Pakastaan oo ka sii daraysa. Hadda waxaa soo bidhaamaya inay daneynayaan in arimaha soomaaliya lagu dhameeyo xal dhex dhexaad u ah.
Magacaabida mudanahaan, waxaa kale oo taageeri-kara xubnaha golaha barlamaanka, ayaga oo ilaashanaya danahooda gaarka ah. Inkasta oo ay jiraan wasiiro ayagu ku hawlan in jagadaan loo magacaabo iyo taageerayaashii Geedi oo doonaya in wasiirka koowaad uu noqdo mid aan ka tirsaneyn barlamaanka. waxaan wada ognahay buggii ka koobnaa 116 bog ee dhawaanloo qeybshay xubnaha barlamaanka, waxaa ku jira qodob ka hadlaya in wasiirada iyo wasiirka koowaadba laga keenikaro dibada barlamaanka. ka hadalka qodobkaan baa ku soo beegmay xilli uu bannaan yahay kursigii jagadii wasiirka koowaad, loona wada hanqal taagayo. xubnaha waxaa mideynaya arimo oo ka mid yihiin:
1) in xubno dibada laga keenay aan la siin jagooyinkaas( w/koowaad, wasiirada),
2) Inay taageerayaan codsigii madaxweyne Yusuf oo yir� ha la meel mariyo�,
3) In dib loo dhigo dhaqan galinta qodobkaan ilaa doorashada 2009.
Sidoo kale waxaa taageeraya magacaabida mudanahaan ganacsatada Soomaaliyeed, oo aad u daneynaysa ciddi hagaajineysa xiriirka ganacsiga ee ka dhexeeya soomaaliya iyo adduunka kale, gaar ahaan dalalka khaliijka carabta. Mar haddii aan batrool la qodeyn !!!.
Magacaabida Buubaa waxay kaalin weyn u buuxin laheyd madaxweynaha, haddii uu taageero ka heysto dawladaha faraha kula jira arimaha Soomaaliya. Madaxweyne Yusuf wuxuu aad ugu baahan yahay sannadaha u haray inuu soo celiyo dawladii Soomaaliyeed, oo burburkeedii lagu eedeynayo, markii uu jabhadii ugu horeysay ka dhisay dalka Itoobiya. wakhtigaan la joogana lagu eedeynayo inuu horsed u yahay ciidamada shisheeye. Hase yeeshee manta la filayo inuu dareensan yahay, inay lama huraan tahay siddi xal loogu helilahaa dhibaatada ummadda Soomaaliyeed, dalkana loo mideyn lahaa.
Markii la isku soo uruursho,
shacabka iyo waxgaradkiisu waxay aad u taageerayaan in wasiirka koowaad laga dhex xusho xubnha ka soo jeeda deegaan magadishu oo ah xaqiiqada jirta, haddii la dhinac marana dhibaatadeed leh. Aragtidooda waxay ku xoojinayaan, in si dhaqso loogu baahan yahay in la joojiyo dagaalada ka socda deegaankaas iyo dhibaatooyinka ka soo gaaraya maatada. mudanayaashaan hoos ku xusan baa waxay ku jiraan caaradka liiska tartanka, waxna ka mid Afrax ,Dr Tuuryare iyo Mudane Max`ed max`ud Gacmadheere.
Mudane Afrax wuxuu ahaa xubin la filayay inuu ku soo baxo jagada wasiirka koowaad ka hore intii aan Geedi loo magacaabin. Max`ed dheere oo hawl badan kala kulmay arimaha xamar ka dhacaya, kuna baraarugay danaha iska horimaanaya ee siyaasadu ku saleysan tahay, baa hankiisii hoos u dhigay, kuna qanci-kara jagada wasiirka arimaha gudahu uu ka dalici-karo.
Mar haddii dani sidaan ka badin weyday, buubaa wuxuu noqonkaraa xubin mudan in laga dhigo wasiirka arimaha dibada, si dhidibada loo aaso xiriir fiican oo dawladu la yeelato beesha caalamka.
Waxaase hal bacad lagu lisay noqoneysa haddii uu dhabawbo shaki ay ka qabaan shacabka soomaaliyeed in jagadaan loo magacaabo xubin ay wataan quwadaha shisheeye, soomaalidana ku noqda culeys aan xal soo kordhin. Inkasta oo Axdigu ogal yahay in Jagada wasiirka koowaad lagu soo magacaabo muddo 30 maalmood gudahood ah, hase yeeshee xaaladda soomaaliya baan aheyn mid degan, sugi-karina maalmo badan inay qaadato magacaabida jagadaan.
Ugu danbeyntii, Madaxweyne yusuf waxaa la gudboon inuu si fiican uga fara buuxsado xulashada wasiirkii koowaad, lana tashado waxgaradka deegaankaas, taxadarna lagu siidaro. Si ummadda loo horkeeno mas`uul u qalma jagada haawaneysa.
Jagadaan waxaa mudan in loo doorto mas`uul:
1. Ay dhibeyso xaalada manta Soomaaaliya mareyso,
2. Hanta hoggaaminta xukuumadiisa,
3. Leh aragti waayo-aragnimo nololeed iyo aqoon,
4. Taageerana ka heysta waxgaradka deegaankaas.
5. Aan mugdi uga jirin xaaladda murugsan ee ka jirta soomaaliya,
6. Wada shaqeyn fiicana la yeesha golayaasha kale ee dawlada,
�Ruuxaad sugeysoo maqan waa la saadshaa� maanso hore
Waxaa Qore: shakib_dhowre@hotmail.com